ဂျာမဏီ: IPM အက်ဆင်း 2019
နှစ်ပေါင်းများစွာကျနော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတရုတ်ထံမှတစ်ဖန်လုံအိမ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့အဖြစ် IPM အက်ဆင်း, Fenglong များအတွက်အရေးအပါဆုံးကုန်သွယ်မျှတပါဝင်ခဲ့ကြ, ဤနှစ်တွင်ရပ်တည်ချက်အမှတ် 4C15 IPM အက်ဆင်းကလက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုပြည့်စုံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည်ခန်းမ 4. ၌တည်ရှိ၏ နှင့်အနာဂတ်ဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု ....
USA နဲ့ကနေဒါ: Oct.2018 အတွက်အစီရင်ခံစာလာရောက်လည်ပတ်
အိန္ဒိယ: Agri Tech မှဘန်ဂလို 2018
18-09-10 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
တရုတ်: အဆိုပါ 20th Hortiflorexpo IPM ဘေဂျင်း
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အမှတ် 1 ဟော်ရီကာချာကုန်သွယ်ရေးကုန်စည်ပြပွဲအာရှရှိ Floriculture & ဟော်ရီကာချာများအတွက်ဦးစီးပလက်ဖောင်း! Hortiflorexpo floriculture, ပန်းမာန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဥယျာဉ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးသော authoritative နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုပြပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Bei အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပမယ့်ကြီးမြတ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည် ...
ဂျာမဏီ: IPM အက်ဆင်း 2018
18-01-15 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အပင် (IPM အက်ဆင်း) အတွက်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုတရားမျှတတဲ့ပန်းမာန်များအတွက်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပြပွဲဖြစ်ပါသည်, Fenglong ဒီတရားမျှတတဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ, ဤနှစ်တွင်ရပ်တည်ချက်အမှတ် 8A53-4 နှင့် 8A53-5 ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲ IPM အက်ဆင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ဘယ်လောက်မှာဘယ်လိုကျွမ်းကျင်ပိုင်ပူးတွဲ၏ဒီဂရီအံ့သြနေကြတယ် ...